Amaphi amaphupho apula, uphupha - ukubona ama-apula ephusheni
Kungani ama-apula aphupha ngamaphupho - incazelo yephupho
Emhlabeni kunabantu abambalwa abangathandi ama-apula - izithelo ezinomsoco, ezinempilo nezithelo ezihlwabusayo. Futhi kusho ukuthini uma lesi sithelo siyiphupho ephusheni? Ingabe uphawu oluhle noma uphawu olubi? Konke kuncike kwimininingwane ethize yephupho, kanye nendlela yokuhumusha.
Ukubona ama-apula ephusheni ngokusho kwencwadi yephupho likaMiller
Isazi sokusebenza kwengqondo uGustav Miller sisho encwadini yakhe edumile yokuphupha efaka i-apula ephupheni kuphela izidingo ezifanele. Ikakhulukazi uma zinkulu, zibomvu, zisha futhi zihlala emthini phakathi kwamahlamvu atshisayo. Kodwa ukudla izithelo eziphahliwe, ezimbi kakhulu ephusheni ngeke zilethe okuhle. Uma kukhona izinguquko eziphawulekayo empilweni yakho, futhi uyabesaba, bese ubona iphupho nge apula elibomvu noma oluhlaza okwesibhakabhaka kuyisibonakaliso esiqinisekile sokushiya ukungabaza futhi uqhubeke phambili. Kodwa qaphela - uma ama-apula abomvu ephezulu kakhulu kwe-apula, futhi kufanele ukhuphuke emaqabunga - mhlawumbe akufanelekile. Ama-apula elele phansi axwayisa ngokumelene nama-flatterers nabangane abayizikhohlisi, alungele ithuba lokuqala lokunamathela ummese kuwe emuva. Uma izithelo zibola, usuke uchitha amandla akho.
Kungani ama-apula aphupha encwadini yephupho kaVanga
Ngokusho kwencwadi iphupho yalo mprofethikazi omkhulu, ama-apula avuthiwe awuphawu lokuhlakanipha nomqondo wendawo yonke. Ngakho-ke, lowo owalonda futhi uyadla, uyaqonda ukuthi kuyini ngempela. Uma ephusheni i-apula ebomvu neyomuthi ebomvu yayiphupha, khona-ke imizamo yakho iyobekwa umqhele ophelele, futhi umuntu onolwazi okhulile kakhulu kunani, onokuhlakanipha, uzokusiza kulokhu. I-apula ebolile elele emhlabathini phakathi kwamahlamvu kuyisibonakaliso esibi, ukudumala, amanga, ukukhashelwa. Kungashiwo okufanayo ngendoda ephupha isithelo esivuthiwe ngomese.
Ukuchazwa kwama-apula ephusheni ngokusho kwencwadi yephupho likaNostradamus
Ukubona ephusheni lakho i-apula enkulu, enhle, evuthiwe iyisibonakaliso sokusondela kokuphumelela okukhulu noma ukutholakala okukhulu. Ngakho, maduze uzohlonishwa yinani labantu abaningi. Kodwa isithelo esibolile sibikezela ukwehluleka kwecala langamanje. Kukhona i-apula ebomvu noma eluhlaza ephusheni okusho ukuthi maduzane uzothola ukuhlangana okujabulisayo nomfazi okhethekile. Leli phupho lingabuye libe nokubaluleka okukhulu - ukuthi maduzane owesifazane uzoqala amandla kunoma yiliphi izwe lomhlaba, lapho isithombe sonke sezombangazwe sizoshintsha ngokuphawulekayo. Uma uphupha kanyekanye ama-apula amaningi abomvu phakathi kwamahlamvu amasha, incazelo ichazwa ngale ndlela: izithelo ezimangalisayo zizotholakala maduzane ukuthi ziphulukise ezinengi zezifo.
Ama-apula esihlahleni - incazelo yephupho ngokusho kwencwadi yephupho kaFreud
Njengoba kuyaziwa, i-psychoanalyst Sigmund Freud wacabangela amaphupho avela ekubukeni kobulili. I-apula elibomvu noma eliluhlaza kule ncazelo - uphawu lwesono sangempela, ngoba ngemva kokudla, abantu bayakujeziswa ukuhlushwa okungapheli nokuzulazula. Ekuqondeni uFreud, ukubona i-apple enkulu ebomvu yisifiso sokuthola okuthile. Isibonelo, uma udla isithelo, khona-ke unesifiso esiyimfihlakalo sokulala nomuntu othile, kodwa lokhu akunakwenzeka, ngoba into efunayo ijwayele ukuthandana ngokobulili obufanayo. Nokho, uma unesifiso esinjalo, iphupho lingabonwa ngendlela enhle. Uma udla izithelo ezinomsoco noma omuncu ephusheni, empeleni ukholelwa ukuthi uxhumano lomlingani wakho ohlangothini. Kodwa lezi zinsolo azikho ngokuphelele, ngokusho kukaFreud. Futhi ngisho noma isigamu sakho sithole umthandi / inkosikazi, ngokushesha maduzane uzodumazeka kule ndawo, futhi uzobuya kuwe. Phela, izibopho zomndeni zinamandla kakhulu kunezibopho ezingavamile.
Ngokusho kwephupho eliphakathi kuka-Miss Hasse, ngokusekelwe eminyakeni eminingi yokubuka okwe-esoteric, ukuxosha ama-apula ephusheni - ukujabula okungazelelwe okungazelelwe, nokubona ukuthi uyadla kanjani - ezijabulisayo ezinothando. Kungenzeka ukuthi uthando olusha luzozalwa kabusha emndenini ojabulayo. Kodwa-ke, uma izithelo ephusheni zibonakala zibuhlungu, khona-ke eceleni kwakho kungumngane okhohlisayo ongaletha izikhathi ezingathandeki. Uma uthole ama-apula, njengesibonelo, njengesipho, lokhu kuyisibonakaliso sokutholwa kwezindaba ezinhle ekuqaleni. Ngokuvamile zihlobene nezimali - unganikeza isikhundla esiphezulu noma umane ukwandise umholo wakho. Kungaba futhi i-lottery noma enye imali engenakulindelekile. Kodwa, uma uphupha ukuthi zibolile noma zilukhuni, qaphela ingozi, ngakho uyaxwayisa incwadi yephupho. Bheka ukuthi ama-apula anqunywa kanjani - ahlukaniswe nabangane, futhi ukuphuza i-apple juice ubikezela isifo.
I-Dream Book ye-Meneghetti
Iphupho lochwepheshe wezengqondo wase-Italy u-Antonio Meneghetti ubeka isithelo se-apula esihlahleni sokuphila, ngezinye izindlela ngisho nokuphila ngokwayo. Kubo bobabili besilisa nabesifazane, lesi sithelo ephusheni sithembisa impumelelo yokuphila kanye nezinjabulo ezihlukahlukene.
Ibhuku lephupho lika-Esoteric
Le ncwadi yokuphupha ithi i-apula eluhlaza, omuncu noma engavuthiwe ifanekisela intsha yomoya, kodwa i-apple ebolile, ebolile - ukuthi umuntu udala kakhulu ngaphakathi. Isithelo esivuthayo sithela impilo, isimo esihle, ukukhuliswa ngokomoya. Uma i-apple ye-worm iphupha, ikwenza uqaphele - mhlawumbe naphezu kwempilo enamandla, kunesifo esithile esiyingozi ngaphakathi kwakho.
Qoqa ama-apula encwadini yephupho - i-gypsy yokuphupha
Ama-apula abomvu afanekisela ubungane obunamandla, obuvivinywe iminyaka, ngenkathi eluhlaza noma obuthakathaka - ukungabonakali nokungapheli ezindabeni zobungane. Ngokusho kwencwadi yokuphupha, owesifazane uyisibonakaliso sokuthi ungumngane omubi. Uma uphupha ama-apula abhakiwe noma i-pie yazo - udumazekile, uma ulindele kakhulu into ethile.
Kungani ama-apula aphupha - ibhuku lephupho lomfazi
Le ncwadi yephupho ithi i-apula ibonisa ukuhlakanipha. Izithelo ezinkulu zilenga esihlahleni, owesifazane ubikezela ukuthi maduzane ukusebenza kwakhe nemizamo kuyokhishwa ngempumelelo. Ukukhohlisa izithelo zomhlabathi, ngokuphambene nalokho, amaphupho omubi - qaphela kakhulu abantu abakuzungezile, akuzona zonke ezikufunayo kahle. Ukudla ama-apula ephusheni kusho umhlangano wokuqala nomuntu othakazelisayo, futhi unike umuntu ukuba adle izithelo - ukuguqula ngaphambili kwothando. Uma ubona ukuthenga esitolo sezithelo ezibolile, ezisezingeni eliphansi, ikakhulukazi ngentengo ephakeme, libonisa ukwehluleka. Umhumushi uyeluleka - qaphela, ungasayine imibhalo ebalulekile esikhathini esizayo esiseduze, ungafaki ukuthengiselana okunengqondo. Uma uphupha ukuthi ugoqa i-apple ebomvu etafuleni, khona-ke uzodingeka ufunde imfihlo ebalulekile yomuntu. Futhi uma izithelo uthatha, khona-ke uma kunjalo, kungenzeka ukuthi ukwehluleka kulindeleke, futhi imigomo ayikwazi ukufezwa.
Ibhuku le-dream dream
Le ncwadi yephupho ithatha i-apula njengesithelo esinqatshelwe futhi ixhuma ngothando, isimo esiyinkimbinkimbi, izifiso zangasese. Indoda ebona i-apula emphupheni, ijabulela ukunakekelwa nokuhlonishwa kwabesifazane, iyajabula ngokuba yinto yokufisa kubo. Uma ehlezi futhi ephumula ngaphansi kwesihlahla sama-apula - amaphupho okuxhumana nomuntu osemusha. Lapho umuntu ephupha ukuthi intombazane imnika isithelo - cishe, empilweni yangempela, ifuna ukukhohlisa. Futhi ngokuphambene - uma owesifazane ephusheni ehlanganyela i-apula nendoda, khona-ke ufuna ukumdukisa. Futhi, ngokusho kwencwadi yephupho, uma owesifazane noma intombazane ephusheni ethatha i-apula futhi ezwa ukuthi kuyinto ebizayo - ngeshwa, kuzomele adumale kumlingani wesondo. Uma lo mlingani engunaphakade, kungase kudingekile ukwenza ezinye izinguquko ekuphileni kocansi, ukukhuluma ngomuntu ongawuthandi - lokhu kubonakaliswa kokuhlakanipha empilweni ndawonye. Ama-apula abomvu adlala emasoleni esitolo noma athengwe nguwe ephusheni angasho ukuqala okusheshayo kobuhlobo lapho isisusa esiyinhloko umbhede. Futhi, abaningi baqinisekisa ukuthi ama-apula abomvu amnandi aphupha ngentombazane ekhulelwe, kodwa akasazi ngalokhu.
Flower iphupho noma yini ongayibona ezimbali iziphupho
Kungani intombazanyana iphupha?
Iphupho legolide noma yini iphupho legolide
Inyoka ingaphupha ngani ngokuchazwa kwephupho?
U-Ksenia Sobchak uvumile kuMaxim Vitorgan ngothando ngamazwi kaPelevin
Konke mayelana nokufometha kweshiya unomphela
I-Horoscope Yothando ngo-Mashi 2014: Injabulo Yothando
Forshmack kusuka herring
Amaqebelengwane e-Lemon anezintambo zikaphayini
Ukukhetha amaphilisi amaningi okuvimbela ukukhulelwa: ukubuyekezwa
Ukubukeka okuhle komfazi wesilisa
Ukuphuza ngokweqile komama kanye nodlame lwasekhaya
U-Rosa Syabitova wakhuluma ngezinkinga emndenini wendodakazi yakhe
Ukulenga ikhasi, kufanele udle: zokupheka ezingcono kakhulu zama-pear jam
Indlela yokubona umthandi omuhle kumuntu
Indlela yokudala umbono omuhle